Barasiil Oo Tijaabisay Gujiskii Ugu Horeeyey Ee Ay Sameeyaan.
Sunday January 06, 2019 - 10:41:17 in Wararka by Halgan News
Khubarro u dhalatay dalka Baraasiil ayaa tijaabiyey Gujis cusub oo ay sameeyeen
, kaas oo noqonaaya Gujiskii ugu horeeyey ee ay si rasmi ah u sameeyaan sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay shabakadda Naval News oo uu wargeyska Dawan qormadan kazoo xigtay.
Gujiskan cusub oo lagu magacaabo S 40 Riachuelo ayaa kamid ah qalab ciidan oo lagu samaynaayey mashruuca PROSUB oo ay bixisay wasaaradda difaaca ee dalka Baraasiil , iyada oo la kaashanaysay shirkad laga lee yahay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo DCNS .
Shirkadda gacanta ku haysa samaynta Gujiskan ayaa sheegtay in ay rajaynayaan in ay dawladda ku wareejiyaan ilaa 4 Gujs oo ku shaqaynaaya Laydh iyo Shidaal, kuwaas oo ay soo saari doonaan dhowaan, waxaanay hadda tijaabiyeen Gujiskii ugu horeeyey, iyada oo ay inta kalena soo bixi doonaan sannadaha 2020 , 2021, 2023 iyo 2024 ka.
Gujiskan mid lamid ah waxa hore u samaysay shirkad laga lee yahay Faransiiska, iyada oo markii dambena ku bedeshay Gujis awood u leh in uu qaado madaxyadda Nuclear-ka, sidoo kale waxa sameeyey kuwo kan lamid ah wadamada Chile, Malaysia ,Hindiya iyo hadda oo ay Baraasiil samaysay.
Gujiskan ay Baraasiil samaysay ayaa dherer ahaan gaadhaaya 72 meter, isaga oo ku soconaaya xawaare dhan 12knots oo u dhiganta 22.2 km/ saacadiiba, waxaanu qaadi karaa shaqaale gaadhaaya 35 qof iyo qalabyo kala duwan oo hub iyo saanad ciidanba leh.